Manchester United iyo Manchester City oo u dagaallamaya Dayar ka tirsan Kooxda Toronto
Home Horyaalka Ingiriiska Manchester United iyo Manchester City oo u dagaallamaya Dayar ka tirsan Kooxda...
Manchester United iyo Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay labaduba xiiseynayaan da ‘yarka reer Toronto Jahkeel Marshall-Rutty.
16-sano jirkaan ayaa kulankiisii ​​ugu horreeyay ee MLS wuxuu la ciyaaray Philadelphia Union bishii Oktoobar ee la soo dhaafay waxaana la rumeysan yahay inuu soo jiitay indhaha kooxo badan oo yurub ah sababo la xiriira qaab ciyaareedkiisa heer dhalinyaro.
Sida laga soo xigtay Tuttosport , labada kooxood ee Man United iyo Man City ayaa si aad ah u xiiseynaya weeraryahankan midigta ku ciyaara, iyadoo Citizens ay durbaba u soo dhawaatay Toronto si ay u diiwaan geliyaan xiisaha.
Hase yeeshee, warbixinta, ayaa sheegeysa in Bayern Munich , Juventus iyo Chelsea ay sidoo kale il gaar ah ku hayaan horumarkiisa.
Marshall-Rutty wuxuu qalinka ku duugay qandaraaskiisii ​​ugu horreeyay isagoo 15 sano jir ah markii uu tallaabada u qaaday kooxda labaad ee Toronto.
Ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ayaa sidoo kale noqday ciyaaryahankii ugu da’da yaraa ee abid looga yeero xulka qaranka Canada markii la xushay bishii Janaayo.
Previous articleReal Madrid oo diyaar u ah inay iska dirto Eden Hazard haddii uu yimaado Kylian Mbappe
Next articleAc milan oo xiiseyneyso weraryahanka Lazio Immobile.